Ny campervan dia fiara mandeha lavitra | Vaovao momba ny dia
Ireo olona izay mahafinaritra azy ireo ny mandeha amin'ny toerana iray manana hevitra vaovao foana izy ireo amin'ny dia sy toerana hitsidika azy ireo. Raha tsy misy fisalasalana dia misy fomba maro hivezivezena, izay ny fiaramanidina matetika no mahazatra indrindra raha mankany amin'ny toerana lavitra isika. Fa raha te-hivezivezy amin'ny faritra akaiky isika na hanao dia lavitra izay ankafizintsika isaky ny kilometatra, dia tsy maintsy mahazo fiara hiara-mihetsika isika.
Ny camper van dia mety a hevitra tsara rehefa mandeha, na irery, amin'ny mpivady, miaraka amin'ny namana na fianakaviana. Tsy isalasalana fa ny malaza indrindra dia ny caravans, fa ho an'ireo izay tsy mahavita iray dia afaka mividy van camper foana izy ireo, izay manana tombony maro.
1 Maninona no mividy fiara fitobiana
4 Tombon'ny van
5 Mety ho lafy ratsy
Maninona no mividy fiara fitobiana
Van'ny camper dia a hevitra be dia be ho an'ireo izay mankafy fitsangatsanganana an-dasy sy faran'ny herinandro. Hevitra tsara ihany koa izy ireo amin'ny fitsidihana fety mozika mandritra ny fahavaratra nefa tsy mahafoy zavatra hafa. Tsy misy isalasalana fa fiara iray manolotra fiasa sy serivisy tsara ho an'ny vidiny mirary kokoa noho ny an'ny karajia ity.
Tombony iray hafa aroson'ireto van ireto amintsika ny fahafahany ampifanaraho amin'izay ilain'ny olona tsirairay. Amin'ny tranga maro dia miangona miaraka amin'ny fanampiny fanampiny tadiavina izy ireo, ary misy habe samihafa azo isafidianana, manomboka amin'ny fototra indrindra ka hatrany amin'ireo manana trano fidiovana na lakozia ary valindrihana avo.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantarintsika dia ny tiana holazaina raha miresaka momba ny fiara fitobiana. Ireo karazana van ireo dia tsy Van misy seza fotsiny na misy faritra misy entana any aoriana. Ireo karazana van ireo dia vonona ny hanao motera, fa ny haben'ny azy ireo no mahatonga azy ireo ho voafehin-javatra kokoa Ireo karazana van ireo dia lasa trano fivezivezena ary miankina amin'ny toetrany, azon'izy ireo atao ny manana trano fisakafoanana, faritra fandrahoana ary toerana fatoriana.
Satria ny vans dia voafetra kokoa amin'ny habaka noho ny motera, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mampiasa ny faharanitan'ny mpamokatra. ny apetraka sy afenina ny fandriana hanamboatra làlana ho an'ny faritra iray azonao hipetrahana hihinana mandritra ny andro. Saingy amin'ireny van ireny dia azo apetraka ny serivisy samihafa, mazava ho azy, miankina amin'ny habeny.
Zavatra tsy mitovy no azo ampiana amin'ireo vanim-potoana ireo, fa tsy maintsy jerentsika hatrany ny habeny. Ao amin'ny van fitobiana kely kokoa ny matetika apetraka dia latabatra mirotsaka, faritra fitehirizana hitondra zavatra sy toerana hanalana ny seza ary hatory eo ambonin'izy ireo. Raha salantsalany ny haben'ireo van dia azo atao ny manampy fampiononana hafa, toy ny fametrahana lakozia kely, latabatra sy seza ho an'ny faritra fisakafoanana sy fitehirizana. Amin'ny vanobe lehibe kokoa dia afaka mandeha lavitra ianao ary mametaka trano fandroana azo ampiasaina amin'ny toerana kely.
Ny fahasamihafana amin'ny van dia mety miovaova be fa ny ankamaroany dia manana ny fahafahany manala na mitahiry ny latabatra sy ny toerana hipetrahana mba hahafahana mamorona faritra hatoriana. Ny lehibe kokoa ny habe, ny lehibe kokoa ny habaka manerana ary koa eo an-tampony. Amin'ny vanobe lehibe kokoa dia afaka mankafy ianao na avy amin'ny valindrihana miakatra aza, izay mamela ny hijoro ao aoriana, izay mahatonga antsika hahatsapa ho toy ny tao anaty karajia. Raha fintinina, raha misafidy ny safidy lehibe indrindra isika ary manana serivisy bebe kokoa dia hanana zavatra mitovy amin'ny motera isika.
Tsy misy isalasalana, ny campervan dia safidy tsara ho an'ny fianakaviana izay te-hivoaka amin'ny faran'ny herinandro hijerena an'izao tontolo izao. Ity karazana van ity dia mety ho an'ny dia an-dàlana, mijanona amin'izay tiantsika. Satria tsy motera io dia azo apetraka saika na aiza na aiza. Ho fanampin'izany, manome antsika mora kokoa ny fanodinana. Tena azo ampiharina ireo mpamily ary manana modely maro azo isafidianana amin'ny habe sy tolotra isan-karazany koa izahay. Amin'izany fomba izany, rehefa misafidy fiara fitateram-bahoaka isika dia hisafidy fiara izay tena mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika. Ohatra, raha tsy hampiasa azy io fotsiny isika amin'ny faran'ny herinandro, dia habe kely na salantsalany no mihoatra ny ampy.
Mety ho lafy ratsy
Ireo vans camper ireo dia manana tombony betsaka, fa mety misy fatiantoka ihany koa. Ny iray amin'izy ireo dia ilay kely kokoa ny toerana noho ny an'ny maotera. Raha fianakaviana be dia be izany dia mety tsy ho ampy ny van camper. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy jerentsika aloha raha tena mifanaraka amin'ny ilaintsika ny serivisy sy ny haben'ny van. Raha misy van sasany dia tsy hanana trano fidiovana na lakozia isika ary tsy mahazo aina amin'ny dia lavitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Van Camperized, hevitra tsara hivezivezena